एक्सरर्साइज विनै फिट रहन चाहनुहुन्छ? यसो गर्नुहोस् | Hamro Doctor News
एक्सरर्साइज विनै फिट रहन चाहनुहुन्छ? यसो गर्नुहोस्
व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसमा एक्सरसाईज गर्ने समय कम हुँदै गएको छ ।
एक्सरसाइज गर्ने समय कम भए पनि उनीहरूमा फिट रहने चाहन भने बढ्दो छ । किनकी फिट रहनाले मानिस स्वस्थ र स्फूर्त रहन्छ । सन्तुलित खानपानका साथै नियमित व्यायामले तौल नियन्त्रणमा रहनुको साथै विभिन्न रोगबाट टाढा रहने प्रायः सबैलाई जानकारी छ । तर, व्यस्त जीवनशैली र समय अभावका कारण उनीहरू एक्सरर्साइज गर्ने समय छुट्टयाउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि फिट रहने केही उपाय छन् । जानौ ती उपायहरू :
अफिसमा लिफ्टको साट्टा भर्याङ्गको प्रयोग गरौं
तपाईंको अफिसमा लिफ्ट र भर्याङ्ग दुवै छ भने लिफ्टको साटो भर्याङ्गको प्रयोग गर्नुहोस् । भर्याङ्ग चढ्ने र ओर्लने क्रममा तपाईं अतिरिक्त समय खर्चिएविना नै व्यायाम गर्न सक्नु हुन्छ । अफिसपछि वा छुट्टिमा कतै बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, जस्तैं बजार वा साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने बेला पैदल हिड्ने गर्नुहोस् । पैदल हिड्नाले एक्सरसाइज पनि हुन्छ र फिट पनि रहिन्छ ।
घरको सफाई गर्नाले पनि हुन्छ व्यायाम
खाली समयमा घरको सरसफाईलाई पनि दैनिकीमा समावेश गर्नुहोस् । घरको सफाईका क्रममा झाडु, पोछा लगाउँदा पनि एक्सरसाइज हुन्छ । यसले तपाईंको शरीर फिट राख्न मद्दत गर्छ । सरसफाई गर्दा मांसपेशीमा खिचावट हुन्छ जुन शरीरको लागि लाभकारी हुन्छ । यस्तै टिभी हेर्ने बेलामा पनि व्यायाम गर्न सकिन्छ । बसि–बसि घाँटी र काँधलाई घुमाएर व्यायाम गर्न सक्नु हुन्छ । हात र खुट्टाको व्यायाम पनि गर्न सकिन्छ । यसरी बसिरहेको बेला पनि हात खुट्टा, घाँटीको व्यायाम गर्न सकिन्छ ।
आफिसमा बसेर होइन उभिएर कुरा गर्नुहोस्
तपाईं अफिसमा कुनै पनि कुरा गर्न चाहनु हुन्छ भने बस्नुको साटो उभिएर गर्नुहोस् । यदि तपाईं उभिएर कुरा गर्नु हुन्छ भने दिनभरमा करिब ३६ क्यालोरी खपत हुन्छ । तर, ध्यान दिनुहोस् यसका लागि सँधै सिधा उभिएर कुरा गर्नुपर्छ ।
खानाले हाम्रो शरीरमा ईन्धन पूर्तिको काम गर्छ । खानाले हामीलाई चाहिने पोषकतत्व प्राप्त हुन्छ । जसले शरीरको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ र उर्जा पनि दिलाउँछ । त्यसैले खाना खाँदा सँधै सन्तुलित खाना नै खानु पर्छ । किनकी सन्तुलित खानाले हाम्रो मस्तिष्कले पनि राम्रोसँग काम गर्छ । नियमित खाना खानाले शरीरमा लगातार ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । खाना छोड्नाले शरीर र मस्तिष्क दुवैले थाकेको महसुस गर्न थाल्छ । धेरै कैफीनयुक्त खाद्य पदार्थबाट बचौँ । कैफीन सेवनले निन्द्रालाई प्रभावित पार्छ ।
सुताईको गडबडले मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो प्रभाव पर्छ । जब तपाईंको निन्द्रा राम्रो र पुरा हुन्छ त्यो समय तनाव कम हुन्छ र ताजा महसुस हुन्छ । काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ र सकारात्मक सोच आउँछ । तपाईंलाई कति निद्रा चाहिन्छ त्यो व्यक्तिको शरीरमा निर्भर हुन्छ । यदि तपाईं दिनभर काम गरेर पनि थकान र निन्द्रा महसुस गर्नु हुन्न भने तपाईंले पुरा निद्रा लिएको बुझ्न सक्नु हुन्छ ।
कुनै पनि काम गर्नु अघि नै बिफल होला की भनेर सोच्नु हुँदैन । सधंै सकारात्मक सोच राख्नु पर्छ की राम्रो हुन्छ र काम सफल हुन्छ । सकारात्मक सोचर गरिने जुन सुकै कामलाईं स्वीकार गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ । तपाईं कस्तो देखिनु हुन्छ, वा तपाईलाई कसैले मन पराउँछ वा पराउँदैन, यी सबै कुरालाई वास्ता गर्नु हुँदैन । किनकी मानिस अनुहार राम्रो भएर होइन उनको काम र व्यवहारले प्रभावित हुन्छन् । नकारात्मक सोच भएकाबाट टाढै रहनु राम्रो । हाम्रो सोचले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले तपाईं सँधै सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्नुहोस् ।
रुची पूरा गर्न समय दिनुहोस
जति व्यस्त भए पनि आफ्नो रुची वा रहर पूरा गर्न समय अवश्य निकाल्नुहोस् । यसो गर्नाले मानसिक रुपमा तरोताजा बन्न र महसुस गर्न सकिन्छ । मस्तिष्कमा ‘फिल गुड हर्मोन’को बहाव हुन्छ । जसले गर्दा तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । जब तपाईं मानसिक रुपले खुसी हुनुहुन्छ त्यसबेला स्वस्थ रहनुका साथै र फिट पनि रहनु हुन्छ ।
(यो जानकारी जर्नल अफ क्लिनिकल प्राक्टिस एण्ड इपिडीमियोलोजी तथा मानसिक स्वास्थ्य विभागबाट लिइएको हो ।)
Last modified on 2019-01-08 15:17:33